DAAWO VIDEO: Xildhibaano ka xanaaqay hanjabaadii madaxweyne Deni, ‘‘ Si aan xushmad laheyn buu madaxdii madasha ula dhaqmay‘‘! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO VIDEO: Xildhibaano ka xanaaqay hanjabaadii madaxweyne Deni, ‘‘ Si aan xushmad...
DAAWO VIDEO: Xildhibaano ka xanaaqay hanjabaadii madaxweyne Deni, ‘‘ Si aan xushmad laheyn buu madaxdii madasha ula dhaqmay‘‘!
Garoowe (Halqaran.com) – Qaar ka mid ah Xildhibaannada Baarlamaanka Puntland ayaa si adag u dhaliilay Madaxwayne Siciid Deni, oo Ka baxay Golaha Baarlamaanka Markii uu Xildhibaan Su’aallo kulul waydiiyey.
“Madaxweyne Deni wuxuu billaabay Hanjabaad, iyo inaanu Xushmayn Dadkii iyo madaxdii madasha ku sugnaa, Sharciga ayaanu ku kala bixi doonaa oo Jawaab uu ka heli doonaa”.
“Madaxwaynaha wax xumaan ah lama odhan, Su’aal ayaan waydiiyey, waad u jeedeen si cadho leh ayuu Hoolka uga baxay, xildhibaan ahaan iyo Bulsho aan dib ayaanu isugu noqon doonaa”.
Xildhibaan Cawil ayaa la weydiiyay iney wadaan Mooshin ka dhan ah Madaxweyne Siciid Deni ayaa ku jawaabay “Shalay anaga ayaa dooranay biyo uma kaban doono Inaan Xilka ka qaadno, hadduu dastuurka jabiyo”.
Sidoo kale, Xildhibaanada ayaa sheegay in Siciid Deni maalintii la doortay uu ku yimid, islamarkaana isagoo shacab ah uu yimid Xarunta baarlamaanka, isagoo Madaxwayne ahna uu ka noqday.
mooshin ka dhan ah Saciid Deni
Xildhibaano ka xanaaqay hanjabaadii Madaxweyne Deni
axmed October 31, 2019 At 21:04
Sanbalooshe, oo caadifad qabiil qaadey, ayaa ku dhaartay , in uu Taalooyinka farmaajio dhisay Burburinayo, iasaga oo yiri rag Hawiye ah ayaan ku bedelayaa, wakaa caqligiini, tan kale Horta asagu ma la hubaa in uu hawiye yahay, Xawaadle waa sheegato, waa horaana hawiye iska eryry, waa beerlaxowsi nacasnimadiisa. bal aan aragno nacasnimadiisa. iyo awooda uu sheegtay.
Sharif Garun November 1, 2019 At 22:05
Waa mudanyahay inaad ka tashataan umana qalmo inuu bulsha hogaamiyo nin hal su.aal ka xanaaqay
Sharif Garun November 1, 2019 At 22:08
واذا خاطبهم الجاهلون قالوسلاما